बिदेशीहरू सक्रिय रुपमा
कोठा सफाई र बिस्तारा बनाउन
अनुभवी प्रशिक्षकहरूबाट प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारीहरूले ईमानदारी संग अतिथिहरूको स्वागतको लागी कोठा सिर्जना गर्दछन।
हाम्रो सफाई कर्मचारीहरू हरेक चरणमा सक्रिय छन जस्तै कार्यालयहरू, किनमेल केन्द्रहरू र होटेलहरू। हामी निर्माणको लागि एक अधिक आरामदायक वातावरण बानाउन मद्दत गर्दछौ।
रोजगारी सुची हेर्नुहोस।
म जापानमा आएको ३ बर्ष भयो
यो कम्पनिमा काम गर्न पाउँदा धेरै नै खुशि छु।
२०१४ मा सहभागि भयो
मेरो देशको साथिहरु पनि
यहाँ धेरै नै भयकोले म आफुलाई सुरक्षित ठान्दछु।
यो होटेलको काम गर्ने बातावरण धेरै नै राम्रो र नेपाली साथिहरु पनि धेरै नै भयकोले मैले यो होटेलमा काम गर्नको लागि आवेदन गरे।
म जापान आएको ३ बर्ष भयो तर पहिला मलाई केही थाहा थिएन मैले आफै कोशिस गरेर सिके म सुरु मा जापान आउदा छक्क पर्थे यहाँका धेरै मान्छे देखेर यति धेरै मान्छे कहाँ बाट आएका होलान भनेर यहाँको ट्रेन धेरै देखेर म छ्क्क पर्थे अनि थकित् पनि हुन्थे |
कडा मेहनत गरेपछि म खानाको आनन्दा उठाउछू।
म कोठा सफा र बिस्तारा मिलाउने काम गर्छू। म भन्दा पहिला छिर्नू भएको कर्मचारीले मलाई सुरु देखी काम सिकाउनु भयो। थाहा नभएको कुराहरू धेरै थिए तर उहाले मलाई सजिलो संग काम सिकाउनू भयो अनी मैले पनी मन लगाएर काम गरे ।
मेरो कामसंग राम्रो सम्वन्ध छ( म मेरो काम देखी खूसी छू) म मेरो काम पूरा गर्छू अनी म प्रायजसो साथीहरू संग जापानी खाना खान जान्छू। मलाई जापानको रामेन अनी अन्य खानेकुरा खान मन पार्छ।
आफुले जस्तो प्रकारको काम गर्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारको प्रतिफल पाउनुहुन्छ ।
कहिले काही कार्डमा ग्राहकले सन्देश छोडेर जानुहुन्छ जुन सन्देशले गर्दा काम गर्ने अझ धेरै प्रेरणा मिल्छ । साच्चिनै भन्नु पर्दा टोइलेटहरु सफा गर्नु अलिकती गाह्रो लाग्छ तर म ग्राहकहरुले सफा उपकरणको प्रयोग गरेको हेर्न चाहान्छु र आफुले गरेको काम ग्राहकले पहिचान गरिदिनु हुदा खुसीको अनुभूती हुन्छ।
मेरो लक्ष्य अहिले भन्दा पनि अधिक र सहि तरिकाले काम गर्ने छ।त्यसैले म अबदेखी अझै धेरै मेहेनत गर्नेछु।
जागीर खोजकर्ता हरूको लागी सन्देश
छोटो समयमै काम सजिलै सिक्न सक्नु यो कामको ठुलो लाभ हो किनभने म जस्तै धेरै बिदेशिहरु हनुहुन्छ । त्यसैले सबै सँग भेट्न मलाई खूसी लाग्छ । गाह्रो काम सबैले मिलेर गरे कामलाई सजिलो र रमाईलो बनाउन सकिन्छ। यहाँ काम गर्दा मलाई आफ्नै परिवार सँग समय बिताएको महसूस हुन्छ। त्यसैले मैले छिट्टै काम सुरू गरे।
हामी नयाँआउने व्यक्तिहरूलाई हृदय देखि स्वागत गर्दछौ त्यसैले आऊनुहोस् सँगै काम गरौ।
Q.यो जापानमा मेरो पहिलो नौकरी हो।के तपाईहरूलाई समस्या छैन?
काममा धेरै बिदेशीहरू हुनुहुन्छ। विस्वासको साथ आवेदन गर्नुहोस।
Q. मैले इन्टरभ्युमा ल्याउनु पर्ने चिजहरु के- के हुन?
जाइरो कार्ड र पासपोर्ट लिएर आउनुहोस।
Q. कुन ठाउको विदेशीहरूको संख्या धेरै छ?
नेपाल,वियतनाम, फिलिपिन्स, चीन, इन्डोनेसिया जस्ता आदिवासीहरू हुनुहुन्छ। विस्वासको साथ आवेदन गर्नुहोस।
Q म मेरो नजीकैको होटेलमा काम गर्न चाहान्छु।
३० भन्दा धेरै होटेलहरूमा काम लगाईदिन्छौ। निर्धक्क भएर सम्पर्क गर्नुहोस।
Q के मैले यातायातको भाडा पाउन सक्छु?
यो कम्पनीको नियम अनुसार पूर्ण भुक्तानी गरिनेछ।
Q. कस्तो प्रकारको शिफ्ट हो?
प्रत्येक महिना ११ तारिख देखी अर्को महिनाको १० तारिख सम्म बनाइन्छ। यदि विदा लिन चाहानु हुन्छ भने पहिलेनै लिडरलाई खबर गर्नुहोस।